अनौठो जानकारी - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख १९, २०७३
रूसको साइबेरियास्थित बैकाल ताल संसारकै सबैभन्दा पुरानो ताल मानिन्छ । यो तालको निर्माण २ सय ५० करोडदेखि ३ सय करोड वर्षअघि भएको बताइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, फाल्गुन २६, २०७२
भारतको जम्मु कस्मिर राज्यमा बग्ने चिनाव नदीमाथि बनाइएको रेल्वे पुल संसारको सबैभन्दा अग्लो तथा लामो रेल्वे पुल हो । नदीको सतहबाट १ हजार १ सय ७८ फिट माथि निर्माण गरिएको यो पुलको लम्बाइ ४ हजार ३ सय १४ फिट छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, फाल्गुन १९, २०७२
 लाटोकोसेरोको दृष्टि अत्यन्तै तीक्ष्ण हुन्छ । कुनै वस्तु नदेखेको अवस्थामा मात्र लाटोकोसेरोले आफ्नो आँखा बन्द राख्छ । बाज प्रजाति र चील प्रजातिका चरापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा उड्न सक्ने चरा लाटोकोसेरो नै हो । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, माघ २७, २०७२
लाटोकोसेरोको समूहलाई अंग्रेजी भाषामा पार्लियामेन्ट भनिन्छ, जसको शाब्दिक अर्थ नै छलफल भन्ने बुझिन्छ । यसै कारणले कुनै पनि मुलुकको सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिसभालाई अंग्रेजीमा पार्लियामेन्ट भनिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
ओलम्पिक पदकमा सुन हुन्छ
एजेन्सी, माघ ६, २०७२
ओलम्पिकमा प्रथम हुनेले प्राप्त गर्ने स्वर्ण पदकमा आजभोलि ६ ग्राम सुन प्रयोग गरिएको हुन्छ । पहिलो पटक ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक वितरण गरिंदा २१ ग्राम सुन प्रयोग गरिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
अमेरिकामा मानिसहरूको सुताइ कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा एउटा विचित्रको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । एक कम्पनीले ३ हजार ७ सय जना अमेरिकीबीच उक्त सर्वेक्षण गरेको हो । सर्वेक्षणले अमेरिकीहरूको सुताइका विषयमा विभिन्न रोचक तथ्य बाहिर ल्याएको छ : पुरा पढ्नुहोस्
हुनेखानेले चाउचाउमा सुन मिसाएर खान्छन्
एजेन्सी, पुस २८, २०७२
आयु बढ्ने तथा निरोगी हुने मान्यताका कारण पूर्वीय समाजमा सम्भव भएसम्म सुनकै थालमा नभए सुनको चम्चाले खाने चलन छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, पुस १९, २०७२
मानिसले प्रयोग गर्ने मूल्यवान् ८ धातु रुदेनियम, ओस्मियम, ह्रोडियम, इरिडियम, पालाडियम, प्लेटिनम, चाँदी तथा सुनमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय धातु सुन नै हो । पुरा पढ्नुहोस्
पुस १३, २०७२
एक सभ्यता यस्तो पनि थियो, जसमा हस्तमैथुन पूर्ण रूपले वर्जित थियो । त्यो अफ्रिकी सभ्यता थियो । यतिसम्म कि त्यहाँको भाषामा हस्तमैथुन भन्ने कुनै शब्द नै छैन । यसलाई त्यहाँ अपराध मानिन्थ्यो । यसैगरी मुस्लिम समाजमा पनि हस्तमैथुन वर्जित छ । पुरा पढ्नुहोस्
महिलाहरू के चाहन्छन् ?
एजेन्सी, पुस ८, २०७२
आम रूपमा पुरुषमा के धारणा पाइन्छ भने जति पटक उनीहरू आफ्नो साथीसित यौन क्रियामा संलग्न हुन्छन्, त्यति नै खुसी उनीहरूकी साथीलाई हुन्छ । जुन केही हदसम्म सत्य हो, तर आजको भागदौडको जीवनमा त्यो सम्भव देखिँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
यौनजीवनलाई सुखी बनाउने १० टिप्स
सम्भोगका बेला जोडीको मूडलाई ध्यानमा राख्नुहोस् । यदि जोडीको मुड खराब छ भने आफ्नो माया र स्पर्शले पहिले उसको मुडलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर सम्भोगका लागि जोडी तयार नहुँदै कर नगर्नुहोस् । पुरा पढ्नुहोस्